ज्योतिजस्तै डा. ज्योति - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ प्रोफाइल ∕ ज्योतिजस्तै डा. ज्योति
ज्योतिजस्तै डा. ज्योति
महेश तिमल्सिना बुधबार, २०७७ माघ ७ गते, १०:३६ मा प्रकाशित
४९ वर्षको उमेरमा पनि उस्तै सक्रियता, अनुहारमा उस्तै चमक, फिट शरीर, हक्की स्वभाव यिनै गुणले पूर्ण छिन्—डा. ज्योति भट्टराई । बिरामीसँगको उनको सामीप्यता अझै लोभलाग्दो छ । दैनिक ४० जना बिरामी जाँच्दै आएकी उनले २० वर्षको अवधिमा लाखभन्दा बढी बिरामीको उपचार गरिसकेकी छिन् । बिरामीहरुलाई नयाँ जीवन दिने डा. ज्योति ज्योतिजस्तै छन्, हरेक बिरामीको परिवारमा आफूले हासिल गरेको कुशलतामार्फत खुसीको प्रकाश छर्ने ।
बुबा श्रीकृष्ण उपाध्याय र आमा तारा भट्टराईको कोखबाट ललितपुरको कुपण्डोलमा वि.सं. २०२८ सालमा जन्मिएकी डा. भट्टराईको बाल्यकाल रमाइलोसँग बित्यो । त्यतिबेलाको काठमाडौं अहिलेको जस्तो प्रदूषित थिएन । कुपण्डोलको वातावरण, सफा बागमती नदी, पहेलपुर तोरी फुलेका बारीका दृश्य डा. भट्टराईको आँखामा तेर्सिन्छन् । अहिले ती खेतबारीमा कंक्रिट महल ठडिएका छन् । त्यसो त ती दृश्यले उनलाई गिज्याइरहन्छ । ‘म सानो छँदा अहिलेको जस्तो प्रदूषित थिएन,’ बाल्यकालका स्मरणलाई खोतल्दै उनले भनिन्, ‘बागमती नदी सफा थियो, नदीमा पौडी खेल्थ्यौंं ।’
५ वर्षबाट उनको प्रारम्भिक शिक्षा सेन्ट मेरिज स्कुलमा सुरु भयो । त्यहीबाट वि.सं. २०४४ सालमा उनले प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी हुन् । पढाइमा अब्बल विद्यार्थीको रुपमा चिनिने डा. भट्टराई सानैदेखि हक्की स्वभावकी थिइन् । अन्यायलाई सहेर बस्ने उनको स्वभाव छैन । त्यसैले विद्यालयमा साथीहरुसँग खटपट परिहरन्थ्यो ।
विद्यालयकी चकचके विद्यार्थी ज्योतिको स्वभाव एकठाउँमा बस्न नसक्ने खालको थियो । उनलाई रमाइलो गरिरहनुपथ्र्यो । समग्रमा उनी क्लासकी जोकर नै थिइन् । त्यसैले रमाइला गीत गाएर, चुटकिला सुनाएर हुन्छ कि नाचेर हुन्छ साथीहरुलाई रमाइलो गराइरहन्थिन् । त्यसैले विद्यालयमा उनलाई शिक्षकले चकचके, क्लास जोकरलगायतका उपनामले बोलाउँथे ।
एसएलसीपछि उनी आईएस्सी अध्ययनका लागि अस्कल क्याम्पसमा भर्ना भइन् । अस्कलमा उनले बेग्लै अनुभव गर्ने मौका पाइन् । त्यहाँको भवन, शौचालय, विद्यार्थीलगायतका थुप्रै कुरामा उनले फरक देखिन् । अस्कल आफैंमा राजनीति बढी हुने क्याम्पसमा चिनिन्छ । त्यतिबेला पनि पढाइ कम राजनीति बढी हुन्थ्यो । तर, उनलाई भने त्यहाँको राजनीतिले कहिल्यै तानेन् । उनी सबै संघसंगठनसँग समान व्यवहार गर्थिन् । अर्को कुरा उनको स्पष्ट बोल्ने बानी थियो । त्यसैले विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनले उनलाई आफ्नो संगठनमा ल्याउन कसरत गर्थे । तर, डा. भट्टराईलाई राजनीतिमा रुची नभएकाले त्यतातर्फ लागिनन् ।
अस्कलमा २ वर्ष विज्ञान संकायमा अध्ययन गरेपछि उनले महाराजगन्जस्थित त्रिवि चिकित्साशास्त्र संस्थानमा एमबीबीएसका लागि इन्ट्रान्स परीक्षा दिइन् । इन्ट्रान्स परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि उनी सन् १९९० मा एमबीबीएस अध्ययनका लागि आईओएममा भर्ना भइन् । डा. भट्टराई सानैदेखि बाठी थिइन् । त्यसो त उनका परिवार, आफन्त, साथीभाइहरुले उनलाई डाक्टर बन्छे भन्थे । त्यसैले उनमा पनि डाक्टर भनेको राम्रो रहेछ भन्ने छाप सानैदेखि बस्यो । सोहीअनुसार डाक्टर बन्नका लागि आईओएममा भर्ना भएको उनी बताउँछिन् ।
‘म सानैदेखि अतिरिक्त कुराहरु जान्न खोज्ने बाठी स्वभावकी थिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘मेरो स्वभाव देखेर आफन्त, परिवारका सदस्यहरुले ज्योति निकै बाठी छे यो पछि गएर डाक्टर नै बन्छे भन्नुहुन्थ्यो । मलाई पनि डाक्टर भनेको राम्रो पेसा रहेछ भन्ने लाग्थ्यो । सायद त्यही प्रेरणाले नै म डाक्टर बनेको हुनुपर्छ ।’
होस्टलमा बसेर एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेकी उनको कक्षामा सधैं अब्बल हुने लक्ष्य हुन्थ्यो । त्यसैले उनी पढाइमा बढी केन्द्रीत हुन्थिन् । त्यतिबेला कतिपय शिक्षकहरु अस्पतालकै क्वार्टरमा बस्ने भएकाले नबुझेका कुरा सोध्न सहज थियो । बेलुका १२ बजेसम्म कलेजको लाइब्रेरीमा गएर पुस्तकहरु पढ्ने उनको बानी थियो ।
असमानतामा समानता खोज्दा झगडा
विद्यार्थी जीवनदेखि उनको हक्की स्वभाव अहिले डाक्टरी जीवनमा पनि देखिन्छ । उनी विद्यार्थीकालमा महिला पुरुष बराबर हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्थिन् । महिला पुरुषबीचको असमानताको खाडल पुर्न चाहन्थिन् ।
तर, कसैले महिलालाई हेप्ने कुरा ग¥यो भने उनी त्यो माथि जाइलाग्थिन् । त्यसैले उनको प्रायः केटा साथीहरुसँग वादविवाद, झगडा परिरहन्थ्यो । कलेजमा पढ्दा बैसाली भट्टाचार्य उनकी मिल्ने साथी थिइन् । उनीसँगै उनको समूहमा ६ जना केटी साथीहरु थिए । त्यसको लिडर डा. भट्टराई थिइन् । त्यसैले कलेजका केटा साथीहरुसँग उनको टोलीले प्रतिवाद गथ्र्यो ।
प्रेम र अमेरिका यात्रा
डा. भट्टराईले एमबीबीएस पढाइ सकेर अमेरिका जाने सोच बनाएकी थिइन् । यहीबेला उनको डा. अरुणराज कुँवरसँग प्रेम चक्कर सुरु भयो । एमबीबीएस पढाइसँगै उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा काम गर्थिन् । डा. कुँवर मानसिक विभागमा काम गर्थे । उनी इमर्जेन्सीमा काम गर्दा डा. कुँवरले बिरामीलाई मायालु तरिकाले उपचार गरेको, उनको बोलीचालीलगायतका कुराले उनको मन जित्यो ।
एकदिन मौका छोपेर उनले डा. कुँवरलाई प्रेम प्रस्ताव राखिन् । उनको प्रस्तावलाई डा. कुँवरले पनि सहर्ष स्वीकारे । डा. कँुवरको नाम एमडीका लागि निस्किसकेको थियो । त्यसैले उनी नेपालमै बस्ने विदेश नजाने मनस्थितीमा थिए । तर, डा. भट्टराईको भने अमेरिका गएर पढ्ने र नेपाल आएर काम गर्ने सोचमा थिइन् ।
दुई जनाको सोच फरक भएपनि उनीहरुबीच धेरै छलफल भयो । आखिर डा. भट्टराईले नै आफू अमेरिका गएर पढेर फर्किने कुरामा डा. अरुणलाई कन्भिस गरिन् । एमडीको तयारी गर्नका लागि उनी अमेरिका गइन् । अमेरिका गएर एमडीको सबै तयारी पूरा गरेर नेपाल आइन् । त्यो मौकामा उनले डा. कुँवरसँग विवाह गरिन् ।
सन् १९९८ मा उनीहरु दुवैजना अमेरिका हानिए । डा. भट्टराई अमेरिकाको स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कमा एमडी अध्ययनका लागि भर्ना भइन् । त्यहाँ एमडीका साथै उनले काम पनि गर्न थालिन् । एमडी अध्ययन गर्दैगर्दा उनले मासिक ३ हजार डलरसम्म कमाउँथिन् । इन्टरनल मेडिसिनमा एमडी सकिएपछि उनले त्यही युनिभर्सिटीबाट डायबेटिज एण्ड इन्डोक्राइनोलोजीमा एमडी सकिन् । एमडी सकेपछि न्युयोर्ककै एउटा हस्पिटलमा काम गर्न थालिन् । त्यहाँ तीन वर्षका काम गरिन् । त्यो अस्पतालमा उनको वार्षिक तलब १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर थियो । अमेरिकामै रहँदा उनीहरुको तीन वटी छोरी जन्मिए ।
करिब ९ वर्षको अमेरिका बसाइँपछि उनीहरु सन् २००९ मा नेपाल फर्किए । दुवैजनाको नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएका थिए । नेपाल आएर डा. भट्टराईले शहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र काठमाडौं बाँसबारीमा काम गर्न थालिन् । त्यहाँ उनले ५ वर्ष काम गरिन् । त्यसपछि अल्का अस्पतालमा १ वर्ष काम गरिन् । यो सँगै उनी थापाथलीस्थित मेट्रो क्लिनिकमा काम गर्न थालिन् । हाल उनी मेट्रो काठमाडौं अस्पतालको अध्यक्षसमेत छिन् ।
फूर्सदमा पेन्टिङ, बा आमा भेटघाट
डा. भट्टराईलाई फूर्सदको समय निकै कम हुन्छ । तर, फूर्सद भयो भने पनि उनी त्यतिकै बस्दिनन् । उनलाई पेन्टिङमा निकै रुची छ । फूर्सदको समय धेरैजसो पेन्टिङमा बिताउने उनी छोरीहरुसँग रमाइलो गर्छिन् । कहिलेकाहीँ घुम्न जान्छिन् ।
शारीरिक रुपमा फिट देखिने उनी मानसिक स्वास्थमा पनि उतिकै ध्यान दिन्छिन् । उनी बिहान ६ बजेसम्म उठिसक्छिन् । त्यसपछि केही समय एक्सरसाइज गर्छिन् । मन पर्ने गीतमा १५÷२० मिनेट नाच्छिन् । त्यसपछि केही समय ध्यान गर्छिन् । ध्यान सकेर उनी ब्रेकफास्टको रुपमा अण्डा—पाउरोटी खान्छिन् । ९ बजेभित्र अस्पताल आइसक्छिन् ।
अस्पताल आएपछि पनि उनी एकै ठाउँमा बस्दिनन् । हरेक कोठा–कोठामा हिँड्छिन् । अस्पतालको लन्च समयमा उनी फेरि एक्सरसाइज गर्छिन् । अस्पतालमा उनले बेग्लै एक्सरसाइज कोठा बनाएकी छिन् । जसमा उनी करिव १ घन्टा एक्सरसाइज गर्छिन् । दिउँसो लन्चको रुपमा उनी धेरैजसो रोटी तरकारी खान्छिन् । एक्सरसाइज सकेर दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म बिरामी जाँच्छिन् ।
बेलुका घर पुगेर पनि उनी केही समय पुनः एक्सरसाइज गर्छिन् । छोरीहरुसँग नाँच्छिन् । जसले दिउँसोको तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सहज भएको उनको अनुभव छ । बेलुका ९ बजेभित्र उनी सुति सक्छिन् । यसरी सबैकुराको सन्तुलनले शारीरिक मानसिक रुपमा फिट रहेको उनी बताउँछिन् ।